Lectrosonics, DPA မိုက်ခရိုဖုန်း၊ အသံကိရိယာများနှင့် K-Tek တို့ The Sound Summit Los Angeles ကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Lectrosonics, DPA မိုက်ကရိုဖုန်း, အသံဖုန်းများအတွက်နှင့် K-Tek အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး Los Angeles မြို့ Host မှ
Lectrosonics, DPA မိုက်ကရိုဖုန်း, အသံဖုန်းများအတွက်နှင့် K-Tek အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး Los Angeles မြို့ Host မှ
Los Angeles, သြဂုတ် 31, 2016 - ကဒီမှာ LA က, Lectrosonics, DPA မိုက်ခရိုဖုန်းရှိသည့် AES ပြရန်၏ဖွင့်ပွဲမတိုင်မီနေ့ရက်များ အသံဖုန်းများအတွက်နှင့် K-Tek အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး Los Angeles မြို့ စတူဒီယိုစီးတီး, CA. အတွက်အားကစားသမားရဲ့ Lodge မှာအင်္ဂါနေ့ကစက်တင်ဘာလ 27, 2016, ဤဖြစ်ရပ်သည်အလွတ်သဘောကွန်ရက်နဲ့ audio ပညာရှင်များများအတွက်ပညာရေးတင်ပြချက်များ၏အသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အတူတူသူတို့က, ကိုစုသိမ်းပူးပေါင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်အသံဖမ်းယူများအတွက်နည်းစနစ်များနှင့် tools တွေကိုဆွေးနွေးပါ။ ဤသည်အသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ်ရပ်မှပြန်လည်ရောက်ရှိ Los Angeles မြို့ပထမဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရာအရပျကိုယူဘယ်မှာ။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနယူးယောက်, ချီကာဂို, အတ္တလန်တာ, Orlando တွင်နှင့်တိုရွန်တိုအပါအဝင်အခြားမြို့များအမျိုးမျိုးတွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အရှိဆုံးကောင်းစွာ-လေးစားအသံပညာရှင်များတချို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူတက်ရောက်ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတစ်ဦးတည်း-on-one လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအဖြစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်နေရာအသံဖမ်းယူမှုအတွက်အထူးပြုသောဤသူဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများထံမှအကျိုးရှိမည်။ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း, Lectrosonics, အသံဖုန်းများအတွက်နှင့် K-Tek လည်း DPA ရဲ့ဃအပါအဝင်လေ့လယ်ပြင်၌အသုံးပြုသောလူကြိုက်များထုတ်ကုန်တခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်: screet™ ပါးလွှာခြင်းနှင့် SC4098 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်းအဖြစ် DPA ရဲ့ဃ: dicate™ 4017B သေနတ်များမိုက္ကရိုဖုန်း, Lectrosonics '' IFB-VHF ကြိုးမဲ့စနစ် , SSM "စူပါသို့အနည်းငယ်ကွေ့" သည် micro နှင့်အိုင်ကျူ Filtering နှင့်ကြိုးမဲ့ဒီဇိုင်နာဆော့ဖ်ဝဲ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းနဲ့အတူ HMa က transmitter, Venue2wideband အသံဖမ်း; အသံဖုန်းများအတွက်'' 688 SL-6 အာဏာနှင့်ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်ရောနှော / အသံဖမ်းခြင်း, 6-စီးရီး CL-12 linear fader controller ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း, အ 788T အသံဖမ်းခြင်း, 633 ရောနှော / အသံဖမ်း, နှင့်ထိန်သိမ်း-တောင်ပေါ်မှာ 970 အသံအသံဖမ်း; အဖြစ်ကောင်းစွာ K-Tek ရဲ့ Stingray အသံအိတ်နှင့်ထဲကနေအလားတူ, ခဲနက်ရောင် Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှနှင့်မိုက္ကရိုဖုန်း Shock Mount နှင့် Windscreens အဖြစ်။
အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး Los Angeles မြို့3ညနေမှ 8 နာရီမှကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလူမှုရေးနာရီနှင့် appetizers နှင့်အတူ3pm မှာစတင်မည်ဟုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ရေတိုအချက်အလက်ဆိုင်ရာတင်ပြချက်များတစ်စီးရီးများက4pm မှာနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ညစာ5မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်လိမ့်မည်: 30 ညနေ, ထိုအဖြစ်အပျက်၏အနီးကပ်သည်အထိ6pm မှာစတင်မယ့်ကွန်ယက်အစည်းအဝေးများနှင့်အတူ။ လေးယောက်စလုံးထုတ်လုပ်သူများထံမှကိုယ်စားလှယ်များထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများများကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ရပ်တစ်လျှောက်လုံးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
"ဒါဟာနောက်ကျော၌ဖြစ်ကြီးစွာသောင် Los Angeles မြို့ ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ကပထမဆုံးအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကနေနှစ်နှစ်အမှတ်အသားကိုယ်စားပြုနေသောကြောင့်, "ဂျိမ်းစ် Capparelle, Marketing Manager, DPA မိုက်ခရိုဖုန်းကပြောပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်အဖြစ် "ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းထုတ်လုပ်သူ, ဤဖြစ်ရပ်များမှရှေ့ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်တွင်တစ်ဦးချင်းစီဒေသခံပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အမှန်တကယ်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေပါ။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ချောညှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်လိုင်းများ၏အနာဂတ်ကူညီကျနော်တို့ကဤဖြစ်ရပ်များမှာရှိသည်သောပြောဆိုမှုများပါပဲ။ "
"ကျနော်တို့ကပညာရှင်များအားဖြင့်ဒါကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိဖြစ်ရပ်များ၏အသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးစီးရီးကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပြီးသူတို့ရဲ့အဖိုးတန်တုံ့ပြန်ချက်ကနေအများကြီးသင်ယူကြပါပြီ," ကားလ် Winkler, Lectrosonics မှာအရောင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ်။ "ချီကာဂို, အတ္တလန်တာ, Orlando တွင်, New York နဲ့တိုရွန်တို၌ဤဖြစ်ရပ်ကို hosting ပြီးနောက်, ယခုတွင်ငါတို့သည်အပြည့်အဝစက်ဝိုင်းလာပါတယ်နှင့်မှပြန်လာသော Los Angeles မြို့ ကျနော်တို့ 2014 စတင်ခဲ့ပြီးရှိရာ။ ကျနော်တို့ဖြစ်ရပ်များ၏ဤအလွတ်သဘောစီးရီးမှတဆင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူစိတ်ကူးများဝေမျှနှင့်အားကစားသမားရဲ့ Lodge မှာနောက်တဖန်လူတိုင်းတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ဖို့ဆက်လက်ရန်ကျူးလွန်နေကြတယ်။ "
"အောင်မြင်သောဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးပြီးနောက်ကျနော်တို့အသံထိပ်သီးအစည်းအဝေး LA ကတစ်ကြိမ်ထပ်အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကိုပြန်သွားဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟု Jon Tatooles ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ် အသံဖုန်းများအတွက်, LLC ။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုမျှဝေအဖြစ်ဒေသတွင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်ထံမှမကြာသေးမီစီမံကိန်းများကိုအချို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်လျှောက်လွှာအာရုံစိုက်မြစ်များမှစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 20 နှစ်များတွင်ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်ဖန်တီးပြီးပြီ," K-Tek ပိုင်ရှင်နှင့်သမ္မတ Brenda Klemme ကပြောပါတယ်။ "ဒီအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးငါတို့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကသော့ချက်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များနှင့်အတူပေးတဲ့ dialog ၏ကြင်နာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Stingray အိတ်၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်း-ပြောင်းလဲနေတဲ့လိုင်းဤစကားဝိုင်းများမှာများစွာသောသာဓကနှင့် Stingray လိုင်းတိုက်ရိုက်ရလဒ်အဖြစ်ကြီးထွားခြင်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှအိမ်ပြန်နေသည် Los Angeles မြို့ ကစတင်ခဲ့ပြီးကျနော်တို့အသံထိပ်သီးအစည်းအဝေးမိသားစုပူးပေါင်းပြီဂုဏ်ယူနေကြသည်ရှိရာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုပြီးရိုးရာစေအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အဆိုပါ ExoSpine သင့်ရဲ့ပခုံးကိုချွတ်ပယ်အိတ်-အလေးချိန်ကြာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအသံအိတ်၏များစွာသောအားသာချက်များကိုရှုမြင်ပုံကိုပထမဦးဆုံးလက်အတွေ့အကြုံအတွက်ခွင့်ပြု, Stingray မြင်းခြေလှမ်းကကြိုးပြောင်းလဲနေတဲ့ဂိမ်းထုံးစံ fittings လွယ်ကူချောမွေ့ပါလိမ့်မည် နှစ်ဆပိုများလာ-USA သို့ Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှ, Shockmounts နှင့်မပီမသ windscreens ။ "
12825 Ventura Blvd, စတူဒီယိုစီးတီး, CA. : အဆိုပါအားကစားသမားရဲ့ Lodge တွင်တည်ရှိပြီး ဒီအခမဲ့ဖြစ်ရပ်တက်သည်လက်မှတ်ထိုးရန်မှာ register ကျေးဇူးပြုပြီး www.thesoundsummit.org/la/.
DPA မိုက်ခရိုဖုန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ် application များအတွက်အရည်အသွေးမြင့် condenser မိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒိန်းမတ် Professional ကအသံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ DPA ရဲ့အန္တိမရည်မှန်းချက်ကအမြဲတိုက်ရိုက်အသံတပ်ဆင်ခြင်း, အသံဖမ်း, ပြဇာတ်ရုံနဲ့ထုတ်လွှင့်တို့ပါဝင်သည်သမျှသောက၎င်း၏စျေးကွက်များအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောမိုက်ခရိုဖုန်းဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူ၎င်း၏ဖောက်သည်များကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှကြွလာသောအခါ, DPA မျှ shortcuts တွေကိုကြာပါသည်။ မဟုတ်သလိုဒိန်းမတ်အတွက် DPA စက်ရုံမှာပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကုမ္ပဏီကစေ့စပ်ညှိနှိုင်းပါဘူး။ ရလဒ်အဖြစ် DPA ၏ထုတ်ကုန်တကမ္ဘာလုံးဟာသူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်မြင်သာ, မတူနိုင်တဲ့သတ်မှတ်ချက်များ, အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်, ရှိသမျှအထက်, စင်ကြယ်သော uncolored နှင့် undistorted အသံကချီးကျူးနေကြသည်။ DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.dpamicrophones.com.
ကောင်းပြီ 1971 ကတည်းကရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်နှင့်ပြဇာတ်ရုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းလေးစား, Lectrosonics ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းစနစ်များနှင့်အသံအပြောင်းအလဲနဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှကုမ္ပဏီ၏အပျနှံတွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်အသံဖိုင်အင်ဂျင်နီယာများကမစ်ရှင်-အရေးပါပလီကေးရှင်းနေ့စဉ်အသုံးပြုကြသည်။ Lectrosonics ရီယိုချို, နယူးမက္ကစီကိုတွင်အခြေစိုက်နေတဲ့အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ မှာအွန်လိုင်းကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှု www.lectrosonics.com.
1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, နှစ်ဦးစလုံးဒီဇိုင်း အသံဖုန်းများအတွက် အသံထုတ်ကုန်များနှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အသံဖုန်းများအတွက် အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်, Episode ရုပ်မြင်သံကြားမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, သတင်းစုဝေး, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဖြစ်ရပ်နှင့်အသံစမ်းသပ်မှုနှင့်တိုင်းတာခြင်း application များအတွက်ခရီးဆောင်အသံရောနှော, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံအသံဖမျးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုကိုဖုန်းများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုမော်နီတာ, အသံဖမျးနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီစတူဒီယို applications များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားနှင့်ဖြစ်ရပ်များအဖြစ်မိုဘိုင်း, တီဗီ, ရုပ်ရှင်နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဘဏ်ဍာအပါအဝင်ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေး၏အကွာအဝေးကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဆက်စပ်ထုတ်ကုန်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ အသံဖုန်းများအတွက်, LLC, ဌာနချုပ် Reedsburg, Wisconsin ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည်။ အပိုဆောင်းရုံးများ Madison, Wisconsin ပြည်နယ်, ချီကာဂိုနှင့်ဘာလင်တွင်တည်ရှိပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ် အသံဖုန်းများအတွက် နှင့်ဗီဒီယိုဖုန်းများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ: www.sounddevices.com နှင့် www.videodevices.com.
Manfred N ကို Klemme အားဖြင့် 1996 အတွက်၎င်း၏ '' တည်ထောင်ကတည်းက K-Tek အသံအင်ဂျင်နီယာနှင့်စန်းအော်ပရေတာများ၏အလုပ်ရုံတစ်နည်းနည်းချောမွေ့စေရန်ဆန်းသစ်ရေးကိရိယာများနှင့်အတူအသံကမ္ဘာကြီးကိုထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ အသံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူအမေရိကန်တစ်လိုင်းခဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ် Manfred ရဲ့ပထမဆုံးမစ်ရှင်ပေါ့ပါးသေးစူပါခိုင်ခံ့ရှေးရှေးအသိပေးစာကိုယူကြောင်းဖော်ရွေဒါအသံဖိုင်နှစ်ခုစလုံးဖြစ်ကြောင်းစန်းထမ်းဘိုးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မစ်ရှင်ပြည့်စုံ။ 1999 K-Tek အတွက် Klassic Boom ဝင်ရိုးစွန်းများအတွက် Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကနေနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. K-Tek သည်အခြားဆုတစ်ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်လှလှပပဆောက်လုပ်ထား, အသံ-ဗဟိုပြုထုတ်ကုန်တစ်ခုခင်းကျင်းအောင်၏ဂုဏ်သတင်းရရှိထားပြီးပါပြီ။ မှာသူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု: www.ktekpro.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း K-Tek Lectrosonics အသံဖုန်းများအတွက် တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-08-31
ယခင်: MultiDyne IBC2016 မှာအမြင့်-Density, Configuration Fiber ပို့ဆောင်ရေး Accentuates
နောက်တစ်ခု: IBC မှာပြည်သူ့တိမ်တိုက်တစ်ခု Box မှာ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ Rolls Out virtual Channel ကို